कोरोनाविरुद्धको खोप कहिले आउँदैछ बजारमा ? कति पर्छ मूल्य ? — Sanchar Kendra
कोरोनाविरुद्धको खोप कहिले आउँदैछ बजारमा ? कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडौं । चीनको वुहानबाट विश्वभर महामारीका कारण कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमणका कारण विश्व आतंकित बनेको छ । भने अहिले विश्वका धेरै देशमा फैलिसकेको छ ।
कोरोनाको संक्रमण बढ्दो क्रममा छ । यसलाई नियन्त्रणमा लिन विश्वका कयौँ देश यसको भ्याक्सिन निर्माणमा जुटेका छन् । विश्वभर ३४ कम्पनीहरुले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन तयार पारिरहेका छन्, यीमध्ये केही कम्पनीहरु अहिले तेस्रो चरणको परीक्षणमा छन् ।
रसियाले पनि हालै ‘स्पुतनिक भी’ नामक कोरोना खोपलाई अनुमति दिएको छ । उक्त खोपलाई विश्वकै पहिलो कोरोनाको खोप भनिएको छ ।
हालै उक्त खोपले परीक्षणका क्रममा सकारात्मक काम गरेको विवरण आएको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालसम्ममा विभिन्न कम्पनीले १ सय ४२ वटा खोपहरु निर्माण गरिरहेको बताएको छ । योमध्ये अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी खोप एस्ट्रजेनकाले ठूलो मात्रामा कोरोना भ्याक्सिन तयार पारेको छ । यसलाई अहिलेसम्मकै उन्नत खोप पनि भनिएको छ ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका भ्याक्सिन कम्पनी एस्ट्रजेनेकाले कम मूल्यमा कोरोनाको खोप प्रदान गर्ने बताएको छ । उक्त कम्पनीका एक अधिकारीका अनुसार अमेरिकामा भ्याक्सिनको मूल्य प्रतिडोज ४ रुपैयाँ पर्नेछ ।
भारतीय कम्पनीले पनि कोरोनाको खोप विकास गरिरहेको छ । भारतमा ठूलो मात्रामा बनाउने सेरम इन्स्टिच्युटले भारत र विकाशशील देशहरुका लागि कोरोनाको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनेछ ।
भारतमा यो खोपको मूल्य ३ डलर पर्ने जनाइएको छ । नेपालमा भने ३५० रुपैयाँ पर्ने जनाइएको छ । उक्त खोपलाई युरोपमा प्रतिडोज २.५ युरोसम्म पर्न सक्ने बताइएको छ ।
फ्रान्सले पनि कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन तयार पारिरहेको छ । फ्रान्सको सनोफी पाश्चर कम्पनीले निर्माण गरेको भ्याक्सिनलाई प्रतिडोज १० युरोसम्म पर्ने बताइएको छ । यसको नेपाली रुपैयाँ झण्डै १४ सय हुन आउँछ ।
त्यस्तै चिनियाँ कम्पनीहरु पनि कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन निर्माणमा लागेका छन् । चिनियाँ कम्पनी साइनाफार्मका प्रमुख लिउ जिङगजेनले उक्त खोप छिट्टै बजारमा आउने बताएका छन् ।
यो खोपलाई नेपाली १६ हजार रुपैयाँ पर्ने जनाइएको छ । यस्तै चीनकै मडर्ना कम्पनीले अगस्तमा उत्पादन गरेको खोपको प्रतिडोज ३३ देखि ३७ डलरसम्म पर्ने जनाइएको छ ।
अमेरिकी सरकारले पनि कोरोना खोपका लागि फिशर्च र बायोएन्टेक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । यो खोपको मूल्य अमेरिकी सरकारलाई प्रतिडोज १९.२० डलर पर्ने जनाइएको छ ।
कोरोनाको खोप विकासका क्रममा रहेकाले अझै कुन खोप बढी प्रभावकारी हुनेछ भनेर अहिले नै भन्न नसकिने विज्ञहरुले बताएका छन् । विज्ञहरुले कोरोनाको खोप सन् २०२० का् मध्यसम्ममा उपलब्ध हुने बताएका छन् ।